Warar - Isugeyn casri ah - isbeddellada faahfaahsan ee surwaalka yoga
Maaddaama ay tahay shey aan lagama maarmaan u aheyn yoga iyo jir dhiska, surwaalada qaabeynta jirka ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Naqshadaynta qayb ahaan ayaa aad iyo aad muhiim u ah. Iyada oo ku saleysan hubinta howlaha isboortiga, fiiro gaar ah ayaa loo bixiyaa sarraynta iyo dareenka moodada. Naqshad farsamaysan oo faahfaahsan ayaa ka dhigi karta qaababka jirdhiska caadiga ah inay dib u cusbooneysiiyaan. . Warbixintani waxay adeegsan doontaa qurxinta suulasha dhexda, naqshadeynta isku-darka kala-goynta, faahfaahinta cagaha, beddelka afka, naqshadeynta qurxinta dheeriga ah, iyo godad galmo ah oo ah tiirarka ugu weyn ee lagu sifeeyo farsamada iyo astaamaha naqshadeynta ah ee lagu dhex adeegsaday, iyo inay dhiirrigeliso naqshadayaasha si ay u horumariyaan alaabooyin cusub.
Naqshadda qaabka iskutallaabta u eg ee qaabka dhexda ayaa si fiican wax uga beddeli karta qalooca dhexda oo tusi kara dhexda dheddigga; Naqshadda dhexda ee surwaalka yoga ee xagaaga iyo xagaaga 2022 waxay leedahay isbeddelo badan, iyo qaabka dhibcaha mawjadaha midabbada kala duwanaanta iyo qaababka iskudhafka midabka iskutallaabta ah ee iskudhafan lagu daro gudaha Yoga ayaa ah mid aad u moodo badan iyadoo lagu darayo taabashada dhaqdhaqaaqa; marka labaad, dhexda iskutallaabtu waa la faaruqi karaa, iyadoo muujineysa taabashada dhexda dumarka, galmada iyo moodada.
Naqshadeynta faahfaahsan ee surwaalka yoga-tallaabo-tallaabo ah waxay siisaa shaqada taageerista cagta markii si ballaaran loo kala bixiyo, looga hortago cagtu inay is-rogto oo laga fogaado ceeb; Faah-faahinta cagta ee xilli-ciyaareedka cusubi waa kuwo mooddo badan oo kala jaad ah, iyo isku dhejinta tolidda xargaha iyo qaababka ayaa la isku daray Si aad ugu darto tilmaamaha guud ahaan gunta, waxaa lagu talinayaa in xilliga gu'ga iyo xagaaga ee 2022 ay bilaabi karaan surwaal tallaabo jilicsan oo fujin kara, leh badhamada qurxinta ee furitaanka cagaha si loo hagaajiyo, macaamiishana wey isku hagaajin karaan faahfaahinta tillaabada-naftooda keligood. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu dhejin karaa noocyo kala duwan oo sanduuqyo hadiyad ah oo ribo ah oo ribo ah. Macaamiisha ayaa ku dooran kara sida ay doonaan, taas oo sare u qaadeysa xiisaha macaamiisha isla markaana si wanaagsan ula qabsaneysa baahidooda. Marka lagu daro raadadka-qaabka webbaga, asalka asalka loogu talagalay iskutallaabta canqowga ayaa sifiican u tusi kara anqawyada galmada ee haweenka;
Naqshadeynta furitaanka cagtu waa farsamo naqshad guud oo ay adeegsadaan nashqadeeyayaasha. Sida loo gaaro riwaayad cusub iyo mood ayaa ah waxa ay tahay inaan tixgelinno; loogu talagalay naqshadeynta furitaanka cagaha ee xilli ciyaareedka cusub, waxaad isku dayi kartaa daaweynno badan oo godad ah, oo aad ku dhajineysaa xarig dhalaalaya oo qabow oo ku yaal geeska godka. Marka labaad tolliinka saldhigyada badan ee asalka ah waxay xoojinayaan dareenka moodada guud ahaan surwaalka. Tolmada dharka huruudda ah ee daahfuran oo leh iskudhaf isku dheelitiran ayaa mudan in la fiirsado guga iyo xagaaga 2022.
Dhexda dhinaceedu wuxuu ka samaysan yahay boorsooyin yaryar oo jilicsan oo kala bixi kara. Qurxinta waxaa lagu dhiirrigeliyaa dharka dibedda, taas oo ku habboon soo dejinta walxaha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qurxinta surwaalada yoga. Waxay sidoo kale fududeyn kartaa jimicsiga inay u baxaan jimicsiga oo ay rartaan waxyaabo yaryar sida kaararka marinka iyo furayaasha, taas oo hagaajinaysa habboonaanta; Suunka la hagaajin karo ayaa lagu kala jajabin karaa dhexda dhinaceeda, si markaa macaamiisha ay iskula jaanqaadi karaan dabacsanaanta dhexda, dareenka moodkuna uu u labanlaaban yahay.
Farsamada godadku waxay sii socon doontaa in la isticmaalo gu'ga iyo xagaaga 2022. Aagga godadku wuu kordhayaa xilliga cusub. Isla mar ahaantaana, xajmiga godku wuxuu leeyahay isbeddel ka ballaaran kii hore, waxayna muujineysaa asalka gacmeedka dawaarka asalka ah, oo muujinaya xarrago. Iyo sexy.